काठमाडौंमा बर्सेनि प्रदूषण बढ्दो, फेब्रुअरी र मार्चमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण
लण्डन। विज्ञहरूले नेपालमा वायु प्रदूषण, वन विनास, जलवायु परिवर्तन, सुख्खा, बाढीपहिरोसँगै प्राकृतिक स्रोतको दोहन वातावरणीय समस्याका रुपमा बढ्दै गएको बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आयोजना गरेको ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन’ मा विज्ञहरूले काठमाडौंमा अनियन्त्रित सहरीकरण र सवारीसाधनका कारण प्रदूषण हरेक वर्ष बढ्दै गएको तथा अन्य क्षेत्रमा वन विनास, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहनका समस्या बढ्दै गएको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले विकासका हरेक क्रियाकलापमा वातावरणीय पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए। सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले आईईई र इआईए कार्यान्यन नहुँदा वातावरणीय मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको बताए।
‘दिगो वातावरण सत्र’ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालायका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको समस्या चुनौतीको रुपमा बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले एक्सन प्लान स्वीकृत गरिसकेको बताए। ‘‘तीनवटै सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन हुने गरी काठमाडौंको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न एक्सन प्लान स्वीकृत भइसकेको छ, यही वर्षदेखि सञ्चालनमा जान्छ,’’ उनले भने। लकडाउनको अवधिमा काठमाडौंमा तुलनात्मक रुपमा प्रदूषण घटेको पनि उनले बताए।
जलवायु परिवर्तन, जलाधार संरक्षण, पानीका स्रोत र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र नै घोषणा गरेर काम भइरहेको पनि उनले बताए। उनले पनि स्थानीय सरकारमा जनशिक्तको कमी हुँदा आइईई र इआइए कार्यान्वयनमा केही समस्या देखा परेको स्वीकारे।
प्राडा मदन कोइरालाले स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक रहे पनि प्रदूषण बढ्दै जाँदा नागरिकले स्वच्छ वातावरण पाउन नसकेको बताए। आइईई, इआइए दिगो विकासका उपकरण भए पनि नाम मात्रको प्रतिवेदन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको उनले बताए।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विश्वले नै अनूकुलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विद्युतीय गाडीलाई बढावा दिए पनि नेपालमा कर थुपारेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। एनरआएनए अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष डा केशव पौडलले सहरी वातावरण प्रदूषित हुँदा त्यसको असर मानजीवनमा परिरहेको बताएका थिए। उनले सातौं प्रदूषित मुलुकको सहरमा काठमाडौं रहेको जनाउँदै प्रदूषणका कारण दीर्घरोगीहरू बढिरहेको पनि बताए।
त्रिवि, वातावरण विभागका प्राध्यापक डा रेजिना मास्केले काठमाडौं उपत्यकामा वातावरण प्रदूषणको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले सवारीसाधन, कलकारखाना, इटाभट्टा, भुवनावट र कृषि क्रियाकलापका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषण उच्च रहेको र त्यसमा पनि ८० प्रतिशत प्रदूषण फ्रेबुअरी र मार्चमा हुने गरेको बताइन्।
प्रकाशित: सोमबार, असोज २६, २०७७ २०:१५
आईईई र इआईए कार्यान्यन नहुँदा वातावरणीय मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै।
काठमाडौं उपत्यकामा ८० प्रतिशत प्रदूषण फ्रेबुअरी र मार्चमा।